CC Shakuur oo labo arrin uga horyimid guddiyada doorashooyinka dalka | Warkii.com
Home warkii CC Shakuur oo labo arrin uga horyimid guddiyada doorashooyinka dalka
Siyaasiga caanka ah ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ah hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Wadajir ayaa ka horyimid magacaabista guddiyada doorashooyinka Qaranka Soomaaliya ee 2020 illaa 2021-ka.
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo war qoraal ah soo saaray ayaa shaaciyey inta badan labada guddi doorasho ee laga soo magacaabay HirShabelle iyo Galmudug ay yihiin xubno ka tirsan hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey in laga soo magacaabay xafiiska taliyaha Nabad Sugidda, Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Dhanka kale hoggaamiyaha xisbiga Wadajir oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in xubnaha guddiga heer Federaal ay u badan kood yihiin taageerayaasha baraha bulshada ee Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo).
Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in labadaas qodob ee dhismaha guddiyada doorashooyinka ay yihiin kuwa aan la aqbali karin, islamarkaana ay si weyn uga soo horjeedaan ka xisbi ahaan.
Inta badan xubnaha labada guddi doorasho ee laga soo magacaabay Hirshabele iyo Galmudug waa xubno ka tirsan hay’adda Nabadsugidda Qaranka, waxaana badankood laga soo magacaabay xafiiska taliyaha nabadsugidda.
Halka Guddiga heer Federaal uu badankiisa yahay taageerayaashii baraha bulshada ee Madaxweyne Farmaajo, waxaana soo xulay agaasime ku xigeenka Xafiiska madaxweynaha.
Suuragal maaha in masiirka Dalka iyo doorashada deegaanka aan dadkiisa metelno ay ka arrimiyaan labo wiil oo ilma adeero ah.
Previous articleGalmudug oo war ka soo saartay dagaallo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Next articleWAA KUMA JOE BIDEN OO MUDDO 50 SANO AH RAADINAYAY MADAXTINIMADA MAREYKANKA ?
war Lagu kalsoon yahay oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in beesha caalamka ay Madaxweynaha Soomaaliya kala hadashay doodda ka taagan dhismaha gudiyada...